Tohodranon’i Dabara : anarivony hekitara maro mbola tsy voatondraka | NewsMada
Tohodranon’i Dabara : anarivony hekitara maro mbola tsy voatondraka
Sompitra iray lehibe eto amin’ny Nosy ny faritra Menabe any Morondava, noho ny fisian’ny tohodranon’i Dabara. Ny olana anefa, tsy ampy fikojakojana an-taona maro io tohodrano lehibe io ka velon-taraina ny tantsaha any an-toerana. Lasa tsy mifanaraka ny mponina, miady rano.
Tohodranbo lehibe i Dabara any amin’ny faritra Menabe, izay tokony mahatondraka velaran-tany anarivony hekitara maro. Rano avy amin’io tohodrano no tsinjaraina : misy avy any amin’ny faritra ambony, Mahabo, ary misy amin’ny faritra ambany, Marofototra. Ny amin’ny faritra ambany izao, noho izay fomba fitsinjarana ny rano tsy mety izay, tsy voatondraka ny tanimbary 1.000 ha. Efa fatiantoka goavana izany ho an’ny tantsaha, indrindra raha tsy ampy ny rotsak’orana.
Nambaran’ireo mponina any an-toerana koa fa misy ny tetikasa ataon’ny Sodemo (Société de développement de la plaine de Morondava), tokony hahatondraka tanimbary 20.000 ha. “Hatramin’izao, 14.000 ha no tojon’ny rano, kely ihany anefa izany”, hoy ireo mpamboly. Milaza anefa ny mponina voakasika momba io asan’ny Sodemo io fa tokony mbola hahatratra 7.000 ha ny tanimbary hahazo rano, ary tokony hahavita fotoam-pambolena indroa any amin’izany faritra izany. Raha voatondraka daholo ireo velaran-tany ireo, azo antoka fa hiampy 20.000 t ny vokatra, ho an’ny fotoam-pambolena iray.
Misy lafiny teknika roa amin’io Sodemo io : manangon-drano ary mitsinjara izany. Ireo lafiny teknika ireo anefa tsy voafehy noho ny tsy fisian’ny fikojakojana nandritra ny taona maro. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitsinjarana ny rano avy ao ka lasa tsy mahazo rano ny faritra sasany. Eo no mampisy olana, mampiady ny mpamboly any an-toerana. Voalazan’ny mpamboly mahalala tsara ny fizotran’io asa io hatramin’izay fa tsy misy koa ny teknisianina manara-maso izany. Ny Sodemo moa, natao hanadio ny lakandrano sy hanavao ny fotodrafitrasa rehetra.